Ian Chan weMirror Boy Group Iye zvino Anotsigira Denderedzwa HealthPod
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Ian Chan weMirror Boy Group Iye zvino Anotsigira Denderedzwa HealthPod
Circle HealthPod inzira yekuona imba yakagadziridzwa neYunivhesiti yeOxford, ine PCR-mhando yemhedzisiro mukati memaminitsi makumi maviri. Ian anoimba rwiyo "Iri Idzva Idzva Zuva" kupa simba vanhu kuti vatangezve hupenyu hwakajairika uye kutyaira nharaunda dzine hutano neCircle HealthPod.
Genetics uye diagnostic health test company Prenetics Limited, yabatana maoko nenhengo inodiwa yeboka revakomana vane mukurumbira "Mirror," Chan Cheuk-yin (Ian), kushanda semumiriri wechigadzirwa uye mutambi murwiyo rwekutengesa rweCircle HealthPod.
Iyo Circle HealthPod inokurumidza kuona sisitimu inopa PCR-mhando mhedzisiro yeCCIDID-19 mukati memaminetsi makumi maviri pakuchengetwa kana kumba. The revolutionary tekinoroji yakapika kutyora zvipingamupinyi munyika uye kumisa chinhambwe pakati pevanhu.
Yakagadzirwa neYunivhesiti yeOxford, iyo Circle HealthPod ndiyo imwe yepasirose yepamusoro-soro yekuona dzimba masisitimu. Iyo ihomwe-saizi lab inopa 98.4% kunyatsoita mukuonekwa kweCCIDID-19, kusanganisira 99.9% yeanozivikanwa hutachiona sehutachiona hweDelta. Pain-isina pfupi nasal swab inoshandiswa kuunganidza sampuli isati yaitwa nucleic acid amplification. Iyo HealthPod inotora anenge maminetsi makumi maviri kuendesa PCR-yemhando mibairo kune vanhu vakananga paHealthPod kana kuburikidza nenharembozha yayo, ichiita kuti ive nyore, nekukurumidza, nyanzvi, uye yakavimbika.
Kubatana uku kunobatana neachangobva kuziviswa chigadzirwa mumiriri Ian, nhengo yeboka rakakurumbira vakomana vezvidhori "Mirror." Izwi raIan rinokwezva rakagadzira nziyo dzakawanda dzakakurumbira kuburikidza nezviitiko zveMirror uye mapurojekiti emunhu, ese akagamuchirwa nechido nevatsigiri, zvichiita kuti Ian azivikanwe nekuda kwezuva uye semumiriri mukuru weHong Kong. Mukuwedzera kune tarenda rake remimhanzi, Ian zvakare mutambi mukuru.
Senhengo yapfuura yeHong Kong Men's Volleyball Team, mudiwa wekusimba, basketball ace, uye Taekwondo anofarira, Ian anotenda mukukosha kwehutano. Chimiro chakanaka chehutano chaIan chinomuita mumiriri wechigadzirwa akakwana, achikurudzira vanhu kuti vatangezve hupenyu hwakajairika uye kuve nehanya nehutano. Mimhanzi yaIan inotaridza nyaya yeCircle HealthPod nekubatanidza meseji yehutano hwemuviri nepfungwa mumashoko evashambadziri, ichiparadzira rwiyo runonakidza runotarisira kuporesa nharaunda munguva itsva ino.
Circle HealthPod's mission inounzwa murwiyo "Iri Idzva Idzva Zuva" rakaimbwa naIan uye rakanyanya kugadzirirwa ichi chigadzirwa chekutengesa. Sezvo mutinhimira weriveting uchizadzisa inzwi rake rinosimudza., Ian anoimba pamusoro pechiroto kuti abatanezve nenyika, nharaunda, uye vanhu vakamupoteredza kuburikidza neCircle HealthPod. Anotaura kuti muedzo unogona kuunza vimbiso, rugare rwepfungwa, uye dziviriro kunharaunda. Danny Yeung, Co-Muvambi uye Boka CEO wePrenetics, akati mutsva wekushambadzira uchatepfenyurwa paViuTV.